नेपाल विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको देशको सूचीमा पहिलो - NayaNepal News
Home अर्थ नेपाल विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको देशको सूचीमा पहिलो
नेपाल विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको देशको सूचीमा पहिलो
काठमाडौं । नेपाल विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको देशको सूचीमा पहिलो बनेको छ। प्रगतिका बिभिन्न सूचकहरुमा विश्वभरमा ‘बटम अप’ बाट मात्र नाम खोज्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा हालै भएको एक सर्वेक्षणले भने नेपाललाई पहिलो बनाएको छ। बिरलै आउने यस्ता समाचार समग्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि खुशीको खबर हो। यूरोमनिडटकमले हालै बिभिन्न १ सय ८६ देशहरुमा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१९ मा नेपाल लगानीकर्ताहरुको आकर्षणको देश बनेको देखिएको छ।
यसो भन्दैमा नेपाल लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्ण जोखिमरहित देश बनिसकेको अवस्था पनि होइन। लगानीकर्ताहरुले अझै पनि नेपाललाई बहुतै सावधानीपूर्वक हेरिरहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ। सर्वेक्षण भएका विकासोन्मुख देशहरुमध्ये नेपाल ‘टप इम्प्रुभर’ हो। नेपालले बैश्विक जोखिमको सूचीमा सन् २०१८ मा भन्दा पाँच अंकले सूधार गर्दै १४ स्थान फड्किएर माथि आएको हो। गत पाँच वर्षको अवधिमा नेपालले २४ स्थान उक्लिसकेको छ जुन सुधारलाई सर्वेक्षणले उल्लेखनिय सुधार भनेको छ।
यसैगरी सुधार भएका देशहरुमा मालदिभ्स दोस्रो तथा इथियोपिया तेस्रो भएको छ। त्यसपछि जाम्बिया, बारबाडोस, जमाइका, लाइबेरिया, मोल्दोभा, ग्रिस र बंगलादेशले टप टेनको सूचीमा आफ्नो नाम सुरक्षित गरेका छन्। यी सबै देशहरुले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा संरचनागत जोखिमको सूचकको अध्ययनका आधारमा उत्कृष्ट दश देशभित्र परेका हुन्। सर्वेक्षणलाई राजनीतिक आर्थिक तथा संरचनागत जोखिमका बिभिन्न १५ वटा सूचकहरुका आधारमा अध्ययन गरिएको थियो। नेपालले ति सबै सूचकहरुमा सुधार गरेको छ।
सन् २०१७ को चुनावपछि देशले राजनीतिक स्थिरता पाएको तथा सरकारमा स्थायित्व आएकोलाई सर्वेक्षणले सकारात्मक तथा सबैभन्दा बढी सुधारको पक्ष मानेको छ। यस अध्ययनमा सर्वेक्षण विज्ञका रुपमा काम गरेका अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाका अनुसार नेपालको राजनीतिक स्थिरता, गत तीन वर्षमा भएको उच्च आर्थिक बृद्धि, न्यून मुद्रा स्फिती तथा संघीयतालाई संस्थागत गर्न भैरहेको सुधारका लागि नेपालले सुधारको सूचीमा उत्कृष्ट स्कोर पाएको हो।
नेपालको गत केही वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वास्तविक जिडीपीमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सन् २०१७/१८ मा ६.३ प्रतिशत तथा सन् २०१६/१७ मा ७.९ प्रतिशत बृद्धि भएको देखिएको छ। नेपालमा केही समय यता पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीहरु भैरहेको छ। चीन र भारतले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गरिरहेको तथा अझै लगानीको अवसर खोजिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।Bizmandu.com
Previous articleहुवावेले ल्यायो “हार्मोनी ओएस” नामक आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम
Next articleप्रधानाध्यापकको कुटाइबाट विद्यार्थीको दाँत झर्यो
चाँगुनारायण नगरपालिका बजेटः १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, कहा कति ? हेर्नुहोस्
भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट कहाँ कति ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
सूर्यविनायक नगरपालिकाको बजेटः नागरिकको घर दैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति
गणेश मन्दिर निर्माणार्थ भागवतबाट ३३ लाख संकलन